Baraf hakiyay isu socodka Mareykanka - BBC News Somali
Baraf hakiyay isu socodka Mareykanka
Kadib soddon iyo lix saacadood oo baraf iyo dabeylaha xoogga leh ee Hurricane ay socdeen - ayaa hadda malaayiin qof oo Mareykan ah waxay hadda diiradda saarayaan sidii ay u soo bixi lahaayeen.
Barafkii ugu culsaa taariikhda waxaa uu ka dhacay West Virginia kaasi oo 40 dhibic 5 inch ama 103 cm.
Bartamaha magaalada New York waxay iyaguna haleelay barafkii ugu cuslaa taariikhda abid la xasuusto.
Xannibaad lagu soo rogay socdaalka oo dhan marka laga reebo baabuurta gargaarka deg degga ah jidadka magaalada New York ayaa hadda la qaaday - waxaana la rajeynayaa in gaadiidka dadweynaha qaarkood ay bilaaban doonaan maanta gelina dambe.
Si kasta oo ay tahay, magaalada caasimadda u ah Mareykanka, ayaa tareenada iyo garoomada diyaaradaha la filayaa inay sii xirnaan doonaan - iyadoo la joojiyay toddobo kun oo duulimaadyo diyaaradeed dhinaca xeebaha bari ee Mareykanka.
Shirkadaha diyaaradaha ayaa ilaa Isniinta u dhigay adeegooda. Masuuliyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in hagaajinta dhibaatada ay geysteen duufaanadan iyo barafka ay ku kici karto lacag ka badan hal bilyan oo dollar.